Ergada Haweenka oo Maanta isaga baxay Shirka Ansixinta Dastuurka | KEYDMEDIA ONLINE
Ergada Haweenka oo Maanta isaga baxay Shirka Ansixinta Dastuurka
Muqdisho (Keydmedia Online) - Ergada haweenka ee ka qeyb galeysa shirka ansixinta Dastuurka cusub ee galay maalintiisii 7-aad ayaa maanta gabi ahaanba waxaa ay isaga baxeen holka shirka uu ka socda, ayadoona sababta arrintaan keentay ay ilaa hadda warar kala duwan ay ka soo baxayaan.
Wararka qaar waxaa ay sheegayaan in ka bixitaanka haweenka ee shirka uu salka ku haya kaidb markii haweenku ay waayeen ballan qaadkii loo sameeyay ee ahaa in 30% ay ku yeeshaan baarlamaanka soo socda.
Haweenka oo markii ay shirka ka baxeen kaidb hadlay waxaa ay sheegeen in hadda xubnaha baarlamaanka laga siiyay 24% taasoo ay sheegeen inay tahay ballan ka bax.
Wasiirka haweenka ee Xukuumadda KMG ah Maryan Aways Jaamac oo aan la xiriirnay ayaa sheegtay in la duutiyey xuquuqda haweenka, islamarkaasna laga baxay ballantii lagu gaaray shirarkii Garoowe iyo Gaalkacyo.
Sikastaba xaalku ha ahaadee haweenka ayaa hadda dibadd joog ka ah shirka ansixinta Dastuurka oo galay maalintiisii 7aad.